Xasan C/qaadir: Waa wax cadaaladda ka fog miisaaniyaddii uu Wasiirka Maaliyadda horkeenay Xildhibaanada | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xasan C/qaadir: Waa wax cadaaladda ka fog miisaaniyaddii uu Wasiirka Maaliyadda horkeenay...
Xasan C/qaadir: Waa wax cadaaladda ka fog miisaaniyaddii uu Wasiirka Maaliyadda horkeenay Xildhibaanada
Siyaasiga Xasan C/qaadir Muudey, ayaa dhaliilay miisaaniyaddii uu toddobaadkan Baarlamaanka horkeenay Wasiirka Maaliyadda Somaliya, C/raxmaan Ducaale Bayle, taasoo loogu kala sad badiyay Maamul Goboleedyada Wadanka ka dhisan.
Xasan C/qaadir Muudey, ayaa wax aad iyo aad cadaaladda uga fog ku sheegay miisaaniyadda uu Xildihibaanada Golaha Shacabka horkeenay Wasiirka Maliyadda, maalintii Sabtida.
Xasan C/qaadir, ayaa yiri “Waxay ahayd wax aan u qaadan kari waayay miisaaniyaddii uu maalintii Sabtida uu Baarlamaanka horkeenay Wasiirka Maaliyadda. Waxay ahayd miisaaniyad cadaaladda aad iyo aad uga fog.”
“Waxaan aad uga xumahay inaysan Xukuumadda soo bandhigin miisaaniyad cadaaladda ku saleysan, oo ay madasha la timaado miisaaniyad loogu kala roonaanayo Maamul Goboleedyada. Qof kastana kuma qancin in loo kala sad buriyo Maamul Goboleedyada.”
“Waxaa is weydiin mudan xagee Xukuumadda ka xeeraamisay in Maamul Goboleed la dhisay 1998-kii, uu noqdo Dowlad Goboleedka qoondada ugu badan ku yeesha miisaaniyadda? Ma billad sharaf baa mise abaal gud ahaan bay uga heshay tartan ay la gashay Maamul Goboleedyada kale?
“Xildhibaanada Golaha Shacabka waxaan ugu baaqaya in aysan meelmarin waxaan ay ku sheegeen miisaaniyadda lixda bilood ee soo socota, illaa ay Xukuumadda ka soo bandhigto miisaaniyad isu jaan go’an.”
“Bulshada Somaliyeed waxaa wakiil ka ah Xildhibaanada Baarlamaanka, bulshaduna waxay dooneysaa wax cadaalad ku dhisan, ee ma dooneyso wax cadaaladda ka fog. Cadaalad la’aanta waa midda meeshaan na soo gaarsiisay. Hadaba in cadaalad la hellaa gacantiina ayay ku jirtaa Xildhibaanow.”